AKHRISO: Shuruudaha Muhiimka Ah Ee Uu Lionel Messi Hordhigay Madaxweyne Laporta Si Uu Mustaqbalkiisa Ugu Hibeeyo Barcelona - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaAKHRISO: Shuruudaha Muhiimka Ah Ee Uu Lionel Messi Hordhigay Madaxweyne Laporta Si Uu Mustaqbalkiisa Ugu Hibeeyo Barcelona
AKHRISO: Shuruudaha Muhiimka Ah Ee Uu Lionel Messi Hordhigay Madaxweyne Laporta Si Uu Mustaqbalkiisa Ugu Hibeeyo Barcelona
Kabtanka kooxda Barcelona ee Lionel Messi ayaa madaxweynaha cusub ee Joan Laporta miiska u saaray liiska dalabaadka uu wato si uu kooxda ugu huro mustaqbalkiisa dhaw oo uu u saxeexo heshiis cusub oo dhaafsiisan qandaraaskiisa ku eeg dhammaadka xilli ciyaareedkan.
Hoggaamiyaha Barcelona ayaa u muuqday mid iskaga tagaya kooxda marka uu heshiiskiisu dhaco xagaaga kaddib markii ay kooxda isku dhaceen xilli ciyaareedkii hore.
Laakiin sida uu sheegayo wargeyska Eurosport, Messi ayaa u muuqda mid tixgelinaya oo ka fikiraya heshiis kordhin inuu u sameeyo Blaugrana isaga oo shuruudaha uu ku xidhayana miiska u saaray Laporta.
Shuruuda koowaad ee muhiimkana u ah Lionel Messi ayaa lagu sheegay inay tahay in kooxdu ay suuqa xagaaga soo socda si xoogan u gasho isla markaana ay samayso ugu yaraan hal saxeex oo heer-caalami (World Class) ah.
Barcelona ayaa isha ku haysa saxeexa Sergio Aguero oo ay xulka qaranka Argentina ka wada tirsan yihiin Messi balse madaxweyne Joan Laporta ayaa u muuqda hadda mid awoodiisa iskugu gaynaya soo xerogalinta dhaliyaha Borussia Dortmund ee Erling Haaland.
Qoddobka labaad ee uu muhiimka ka dhigay Messi ayaa ah in kooxda mustaqbalka laga hareero dhiso xiddigaha da’yarta ah ee hadda usoo kacay Barcelona isla markaana ma doonayo in mustaqbalkooda fiican lagu bur-buriyo saxeexyo badan oo la dul keeno.
Xiddigaha da’yarta ah ee ay kamidka yihiin Ansu Fati, Pedri iyo Ilaix Moriba ayaa dhammaantood wacdarro dhigay markii uu tababare Ronald Koeman fursad fiican siiyay.
Qoddobka saddexaad ayaa ah in Messi uu doonayo in la joogteeyo xidhiidh wanaagsan oo lala sameeyo tababaraha kooxda hoggaaminaya si looga bad-baado is-faham waa lamid ah kuwii macalimiintii ka horreeyay.